के भइरहेको छ डा. बाबुरामलाई, किन गर्दैछन् असामान्य व्यवहार? - Everest Dainik - News from Nepal
के भइरहेको छ डा. बाबुरामलाई, किन गर्दैछन् असामान्य व्यवहार?
काठमाडौं, मोटरसाईकलले स्कूटरलाई ठक्कर दिएपछि हिसिला यमीलाई अस्पताल भर्ना गरियो । आइतबार साँझ मोटरसाइकलले उनी चढेको इ–स्कुटरलाई ललितपुरको बालकुमारीमा ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा घाइते भएकी यमीलाई ग्वार्कोस्थित बिएन्डबी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।
यता समाजवादी पार्टीका समर्थकहरुले हिसिला अचेत अवस्थमा अस्पतालको बेडमा सुतेको तस्वीर राख्दै शीर्घ स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका थिए । चिकित्सकहरुका अनुसार, हिसिला एक डेढ घण्टा त अचेत अवस्थामा नै थिइन ।
तर ठीक त्यही समयको वरिपरि राती १० बजेर २४ मिनेटमा डा. बाबुराम भट्टराईले एउटा अनौठो पोष्ट गरे ।
पोष्टमा डा. बाबुराम भट्टराई र हिसिला यमी नाचिरहेका छन् ।
बाबुराम भट्टराईले स्टाटस लेखे– हामी बुढाबुढी सँगै नाच्दै ।
सँगै उनले लेखे– विश फर स्पीडि रिकभरी बडी, अर्थात् शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना ।
बाबुराम भट्टराईको यो तस्वीर र स्टाटस देखेर उनका समर्थक र अन्य सबै चकित परे ।
याे पनि पढ्नुस बाबुरामको उचाइ झन् बढेको छः राप्रपा अध्यक्ष थापा
समर्थकहरुले हिसिलाको तस्वीर सार्वजनिक गर्दा अधिकांशले यसबारे थप जानकारी पाउन र आधिकारिकता सुनिश्चित गर्न बाबुरामको पेज र आईडी खोल्नु स्वभाविकै थियो । तर त्यहाँ उनीहरुले त्यसप्रकारको स्टाटस देखेपछि सबैको मनमा एउटै प्रश्न उब्जियो
आखिर के भएको छ डा. भट्टराईलाई ?
पछिल्लो समयमा समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको व्यवहार असमान्य देखिन थालेको छ ।
यसअघि उनले एउटा स्टाटसमा कमेन्ट लेख्दै “१७ हजार प्लस १” लेखेपछि त्यो निकै भाइरल भएको थियो । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनका एक फलोअर आर्जन अधिकारीबीच भएको स‌वादका त्रःममा माओवादी जनयुद्धमा मारिएका १७ हजार नेपालीलाई संकेत गर्दै आर्जनले कमेन्ट गरेपछि भट्टराईले ‘१७००० प्लस एक हुनुपर्ने रहेछ है’ भन्दै टिप्पणी गरेपछि यसले चर्चा पाएको थियो ।
“त्यो उचाईको व्यक्तिले यसरी लेख्नु केटाकेटीपन हो ।” उनीसँग लामोसमय काम गर्नेहरुले भने ।
बाबुरामकै सहकर्मी अहिले उनको यो असामान्य र केटाकेटी व्यवहारले दिक्क हुन थालेका छन् । विगतमा राजनीतिकरुपमा एउटा असामान्य उचाई पाएका बाबुरामले यो किसिमले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थालेपछि उनीमाथि आलोचना झन चुलिएको छ ।
त्यसैपनि समाजवादी पार्टीसँग उनको एकीकरणको निर्णय उनका कैयन समर्थकले पचाएका छैनन् ।
“बाबुरामभित्र एउटा नराम्रो किसिमको इगो जन्मेको छ ।” बाबुरामकै एकजना निकट सहयोगीले भने, “अहिले अरुका कुरा सुन्नुहुन्न, मुडी बन्नु भएको छ ।”
नेपाली समाजको परिवर्तनमा बाबुराम भट्टराईको विशिष्ट स्थान छ । उनलाई रोल मोडेल मान्नेहरु समेत नेपालमा कैयन छन् । नेपालको विकासमा बाबुरामको विचार आवश्यक छ भन्ने कुरा स्थापित भएको तथ्य हो । तर राजनीतिकरुपमा माओवादीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेपछिको उनको ग्राफ भने निकै खस्किंदो छ । एकजना बुद्दिजीवि भन्छन, “समाजवादी पार्टीसँगको उनको एकीकरणपछि बाबुराम अहिले राजनीतिक, वैचारिक र मनोवैज्ञानिक मन्दीको अवस्थामा छन् ।”
नयाँ शक्तिको नेतृत्व गर्दा समेत बाबुराम भट्टराईप्रति मानिसहरुको आसा नभएको होइन । यद्यपी उक्त पार्टीभित्र बाबुरामले एकल निर्णय गर्न थालेको, लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको भन्दै कतिपयले पार्टी छोडे, कति निष्क्रिय समेत बने । तर अहिले भने यो अवस्था झनै चुलिएको छ ।
उनका हितैषीहरु भन्छन, “डा. साबले एकचोटी गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्नु जरुरी छ । यो तालले वहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ, भन्न गारो छ । हामीलाई वहाँ चाहिन्छ । नेपाललाई वहाँ चाहिन्छ ।”
ट्याग्स: डा. बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी